उनीहरू के गर्दैछन् ?! | Martech Zone
उनीहरू के गर्दैछन् ?!
मंगलवार, मार्च 6, 2007 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
यो हाम्रो कम्पनीमा एक धेरै साधारण विषयवस्तु हो जब यो आउँदछ कि कसरी हाम्रो ग्राहकहरूले हाम्रो सफ्टवेयर प्रयोग गर्दैछन्। त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन सफ्टवेयर डेभलपरले हाम्रा ग्राहकहरूलाई बिर्सन्छन् किनभने त्यहाँ मानिसहरू बीच ईन्सुलेशनको धेरै तहहरू छन् प्रयोग कोड र मान्छे कि लेख्न कोड।
सफ्टवेयर विकासकर्ताहरू र तिनीहरूका सहयोगी स्मार्ट मान्छे हुन्। लेखन सफ्टवेयर चुनौतीपूर्ण छ र अविश्वसनीय संज्ञानात्मक, तर्क र समस्या निवारण क्षमताहरू आवश्यक छ। मलाई थाहा छ धेरै प्रतिभाशाली विकासकर्ताहरू पनि रचनात्मक हुन् र बाँच्दछन् र सास कोड गर्छन्। फेरि ... स्मार्ट मान्छे।
यहाँ के हुन्छ जब कहिलेकाँही बिर्सिएको हुन्छ जब तपाई स्मार्ट केटाहरूको समूहको साथ काम गर्दै हुनुहुन्छ: तपाईको ग्राहकहरुसंग स्मार्ट मान्छे पनि छन्। वास्तवमा, संभावनाहरू यो हो कि तिनीहरूको अदालतमा प्रतिभा तपाईंको प्रतिभासँग मेल खान्छ। यदि तपाईंसँग clients,००० ग्राहकहरू छन् भने - तपाईको ग्राहकमा 5,000,००० पटक प्रतिभा पाउनुहुनेछ तपाईको आफ्नै अदालतमा भन्दा। अनौठो कुरा हो, तीले सामूहिक रूपमा तपाइँका सबै असुरक्षाहरू, वर्कराउन्डहरू, थ्रेसोल्डहरू, डाउनटाइम, बगहरू, गल्तीहरू, खराब कागजातहरू, इत्यादि पहिचान गर्न सक्दछन्। यसमा कुनै उम्कने छैन।
"उनीहरू के गर्दैछन् ?!" - यस प्रश्नको अन्त्यमा चकित पार्नु पर्छ।
ग्राहकहरु तपाइँको उत्पादन को लागी गर्न को लागी आश्चर्यजनक चीजहरु को लागी जानेछ जुन तपाइँले कहिले सोचेको छैन। कहिले आशा गरिएको छैन। एक एकीकरण र अटोमेशन मान्छे को रूप मा, जब म ग्राहकले हाम्रो सफ्टवेयरको साथ केही गरिरहेको छु भनेर सुन्दछु म मुस्कुराउँछु। मैले पहिले अभद्र कोड र तेस्रो पार्टी अनुप्रयोगहरूको साथ समाधानहरू विकास गरें। किन? किनकि यसले काम गर्यो।
त्यो खेलको नाम हो ... यसलाई काममा लानुहोस्। हाम्रो ग्राहकहरु को एक व्यापार प्रक्रिया छ कि ती समर्थन गर्न हाम्रो सफ्टवेयर को उपयोग गरीरहेका छन्। व्यापार प्रक्रियाहरूको एक असीमित सरणी छन्; नतिजाको रूपमा, त्यहाँ ती प्रक्रियाहरूलाई समर्थन गर्न असंख्य समाधानहरू प्रयोग हुन्छन्। त्यो ठूलो कुरा हो। तपाईंको कम्पनीको एक विकल्प छन जब यी चीजहरू हुन्छन्:
भन्नुहोस् कि उनीहरू समर्थित छैनन् र तपाईंको टाउको घुमाउनुहोस् जुन तपाईंको ग्राहकहरू सफल हुन आवश्यक छ।
आफ्नो कान र आँखा खोल्नुहोस्, र तपाइँको ग्राहकहरुबाट सुझाव को उपयोग गरी नयाँ उत्पादनहरु मा तपाइँको उत्पादन लाई ड्राइभ गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ # 1 छनौट गर्नुहुन्छ, त्यो ठीक छ। तपाईंको प्रतिस्पर्धा चयन # 2। तपाईंले त्यस ग्राहकको बारेमा चिन्ता लिनुपर्दैन।
टेक्नोराटी रैंक वर्डप्रेस प्लगइन १.०.। रिलिज गरियो
WordPress: प्रयोगकर्ता लग ईन छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्
मार्स 7, 2007 मा 12: 00 एएम
राम्रो रिमाइन्डर। यदि तपाईंसँग अहिलेसम्म छैन भने, तपाईंले आफ्ना केही समूहहरू जुन उत्तेजित प्रयोगकर्ताहरू सिर्जना गर्न देखाउनु पर्छ।
धेरै क्याथी र दानबाट मनपर्दो वस्तुहरू को।
मार्स 7, 2007 मा 8: 53 एएम
धन्यबाद, ग्रेडेन! यो पक्कै पनि मेरो मनपर्ने सूचीमा छ!
मार्स 7, 2007 मा 11: 40 एएम
र यो सल्लाह सबै अन्य उद्योगहरूको लागि पनि सही हो।
(हामीले भर्खरै पूर्व प्रधानमन्त्रीको एउटा डाक्यूमेन्टरी पूरा गरेका छौं। आज एक सम्भावित क्रेताले औंल्याए कि उहाँ कतै पनि पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई हामीले कतै उल्लेख गरेका थिएनौं। हामी केवल त्यस्तै थियौं कि उनी वास्तवमै थिए। हामीले पूरै बिर्स्यौं कि धेरैलाई थाहा छैन।)
जीवन भनेको निरन्तर सिक्ने हो। र अचम्म।
मार्क्स 7, 2007 मा 2: 18 PM
राम्रो कुरा, मार्टिन!
मार्क्स 7, 2007 मा 6: 13 PM
डगलस, मलाई यहाँ तपाईंको बन्द टिप्पणी मनपर्दछ। तपाइँको प्रतिस्पर्धा #2को ख्याल राख्नेछ!
त्यो यथार्थ हो। अतिरिक्त माईल जानुभएको र वास्तवमा एक ग्राहकको सुन्दा अन्तमा दौड जित्छ। र यो एक स्थिर प्रक्रिया हो।
साइटको विषयवस्तु मनपराउनुहोस्, BTW।
मार्क्स 7, 2007 मा 6: 51 PM
धन्यबाद, अमीन! म अझै मेरो हेडरसँग संघर्ष गरिरहेको छु ... यो अलि अलि घडी छ तर म अझ राम्रोसँग अझसम्म आउन सक्दिन (अझ)।
मार्स 9, 2007 मा 3: 12 एएम
आन्तरिक सफ्टवेयर प्रोजेक्ट लिने बेलामा मैले याद गरेको एउटा कुरा यो हो कि कहाँ सुरु गर्न सकिन्छ भनेर संकेत गर्न विरलै नै हुन्छ। यदि यो राम्रोसँग अभिलेख गरिएको छ भने त्यहाँ २० कागजातहरू हुन सक्दछन् तर तिनीहरू मध्ये कुनैले पनि "पहिले मलाई पढ्नुहोस्!" भन्दैन।
म सँधै शब्द / पीडीएफ कागजातलाई पाठमा रूपान्तरण गर्छु ताकि म ग्रेप गर्न सकूँ।